12 Fikradood oo lagu kala soocayo Suuqgeynta Mawduucaaga | Martech Zone
Waan jeclahay xaqiiqda ah in akhristayaasheennu ay nala dhegaan inkasta oo aynaan si aad ah u abuurnayn abuurka. Hubinta iyo daabacaadda tan faahfaahinta sawir-gacmeedku waxay ka caawisaa inay ka soocnaato daabacaaddeena kuwa kale ee halkaa jooga - laakiin kama aanan sii dhaafin intaas. Kuweena wareysiyada taxanaha ah ee lala yeesho hoggaamiyeyaasha suuqgeynta waa hal dadaal.
Sababta ugu badan ee aan ugu dheggannahay nuxurka qoraalka kooban waa mid si hufan looga eego dhinaca waxtarka. Waxaan haynaa tan mowduucyo ah oo aan wax ka qori karno mana ahan ilo aad u tiro badan. Infografigani ka socda Oracle ayaa igu dhiirrigelinaya inaan xoogaa hal abuur leh, in kastoo. Xogta, 12 Fikradaha Xayeysiinta Mawduuc ee Cajiibka ah (Taasi Maaha Qoraallo Blog ah), waxay bixisaa xoogaa talo bixinno aad ku kala duwanaan karto waxyaabahaaga.
kediska - U qor mawduucaaga sidii kedis ahaan.
Twitter - Ku sii daa waxyaabaha ku jira qaybo yar yar barta Twitter.
gooldhalinta - Ku kala saar waxyaabaha aad ka kooban tahay jaantusyo gaar ah.
Case Study - Iftiimi macaamiisha oo la wadaag daraasad kiis.
Marinka maadda - Ku qor waxyaabaha aad ka kooban tahay waxyaabaha si fudud loo wadaagi karo.
Fariin qoraal ah - Weydiiso ra'yi-baaris SMS-ga ah oo la wadaag natiijooyinka.
Taxanaha - Qor taxane qaybo badan ka kooban si dadka u soo noqdaan.
Share - Qeexi oo wadaag waxyaabaha ku jira bogga waxyaabaha bulshada ka mid ah sida Pinterest.
Wareysiyo - Adeegso qaabka wareysiga oo la wadaag jawaabaha khubarada ..
aan caadi ahayn - Iskuday qaabab kala duwan, jiinis, iyo qaabab is-dhexgal ah si aad akhristayaasha uga qayb gasho.
Erey - Qor hage ama ereybixinta (oo sii cusbooneysii!).
Waxaan sidoo kale jecel nahay wadaagida maqalka, muuqaalka, horay u-eegida warbixinnada iyo waraaqaha cad, iyo - dabcan - sawir-qaadis. Maxay yihiin fikradaha kale ee suuq-geynta suuq-geynta ah ee aad tijaabisay ee sida wanaagsan u shaqeeyay? Xor ayaad u tahay inaad faallo ka bixiso oo aad wadaagto!
Tags: daraasadogooldhalintastrips maaddafikradaha ka koobanfikradaha suuq geynta waxyaabaha ku jirataxanaha nuxurkatilmaamaha ku saabsanQaamuuskaanhanuuniyowaraysiyoPinterestkediskataxanahasharefariimaha qoraalka ahTwitteraan caadi ahayn